ROVA MANJAKAMIADANA : Nitsidika ny Minisiteran’ny Serasera sy kolontsaina
Ny sabotsy faha 11 desambra lasa teo, tonga nitsidika nanara-maso ny fandehan’ny asa fanamboarana teny amin’ny lapan’ny Rova Manjakamiadana ny Minisitry ny Serasera sy Kolontsaina Lalatiana Andriatongarivo Rakotondrazafy sy ireo mpiara-miasa taminy. 23 janvier 2020
Voaporofo tamin’izany fa voahaja hatreto ny fe-potoana amin’ny fandroson’ny karazan’asa maro mikasika ny Lapa rehetra. Taorinan’ny fitsidihana ny Lapan’i Manjakamiadana moa dia nihaona tamin’ireo enin-dahy mpiambina sy mpikarakara ny Rova Ramatoa Minisitra Lalatiana Andriatongarivo sy ny mpiara-miasa aminy.
Izy enin-dahy ireto izay nitaraina tamin-dRamatoa Minisitra fa efa volana vitsivitsy izay no tsy nandray karama tamin’io asa ataony io ny avy amin’ny sampandraharaha naka azy ireo hiasa, tsy mpiasan’ny Minisitera misahana ny kolontsaina moa ireto farany hatreto. Amin’ny maha-mpikarakara ny vako-pirenena dia nitady hevitra ramatoa minisitra sy ny mpiara-miasa ary tapaka fa handoa ny karama tsy voaloa nandritra ny 18 volana, etsy andanin’izay dia hampidirina ho mpiasan’ny Minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsaina manomboka amin’ity volana janoary ity izy enin-dahy ireto.